Daawo: Xildhibaan Dalxa iyo Shacabka Garoowe oo Weerar culus ku Qaaday Hogaanka Maamulada Dalka (Muuqaal) | KALSHAALE
Daawo: Xildhibaan Dalxa iyo Shacabka Garoowe oo Weerar culus ku Qaaday Hogaanka Maamulada Dalka (Muuqaal)
Sep 16, 2018 - 27 Aragtiyood
Garoowe ( Kalshaale ) Prof. Maxamed Cumar Dalxa oo kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya iyo Shacabka ku dhaqan magaalada Garoowe ayaa si kulul uga hadlay Hadalkii kasoo yeedhay Hogaamiyeyaasha maamulada kuwaasi oo sheegay in loo baahan yahay Cid dhex dhexaadisa Dawladda iyo Maamulada.
Inta badan Bulshada ayaa Cadho balaadhan ka muujiyey Arintaasi, waxayna eedaymo dusha ugu tuureen Hogaanka Maamulada. ” Madaxda maamuladu, Waa Badhasaabyo waa khalad inay Raadiyaan dad Shisheeye ” .
Majeerten ayaa shisheeye iyo jaajuusnimo ka harey, waxey la mid tahey DOORSHAAN ayaa Xaar lo’aad ka harey.
“” Boowe nimaan juuqin looma juuqo “”
Nimanka haloo garaabo saxara ayaa barey guuraha habeen.
Life mission agaist reer qurac, war hooy isdaba qabo inta clan animosity cudur ku noqon.
War bal tag Dhul Udug, sidii Dalxa balaad Jeclaatay marka aragto dad Somali ah oo nuuraya oo xagee ka timid ku oranayn..
Majeerteen jiif kuu diiday..
You are lost case, adoo u dudaya dad kaa warhayn balaad dhimatay.
Boowe luqunta kor u qaad, see the light under the tunnel.
War ila arag hillaaca Bari ka muuqda oo rajo i geliyey in Somalia cagaheeda ku istaahtay.
Farmaajo, Khayre, Dalxa, Salaad Cali
Jeele, Abwaan Gamadiid cidii tagta kuu sheegin Somali Puntland haku dayato.
Adigu belada xageed ku aragtay?
Life time mission agaist reer qurac
Arinkaan dowladda dhexe iyo maamulada wilaafkooda maaha wax xun, waa wado natural ah, sidii awooda iyo qayraadka loo qaybsan lahaa. Waa isjiidjiid federalkii waxa ka qaldan loo sixi lahaa.
Positive u arka in goboladii oo midaysan dowladdii dhexe la gardhiganayaan kuna qilaafaan waxay rabin.
Dalku maaha Xamar iyo laba nin qurbaha ka yimid oo u niikino. Dalkaan mardambe nin Xamar fadhiya lagu halayn maayo, talada waa la wada leeyahay macal tuulada Mustaxiil iyo Caluula.
Farmaajo ii geeya!
Laangaab ciilan baad tahee majeerteen maaha dad loo yeeriyo iyagaa wax u yeeriya jaajuusnimana reerka hawiye ayaa ugu horeeyey Koofiyad dhuub sow maahayn 1960 iyoka horba nimankii itoobiy u jaajuusayey.
Taariikhdu way qorantahay.
Hadaad leedahay jabhadii ugu horeysey bay sameeyeena maxaad nooga soo daba yaacdeen hadanu khaldanayn sowdinkii itoobiya nooga daba yimid oo waliba dhulkii aboorka ku noqda qaranimada iyo soomaalinimada aad maanta raadinayso maxaad u fahmi waydeen maalinkaad ar ii qabdha ar ii qabdha waa daaroode aad lahaydeen oo dadka shacabkaa daba yaacayseen ilaa iyo kismaayo idikoo qaarmadow sidii cawaantii. Wixii aad bililiqaysan kadheen iyo wixii aad dhici karteen markii aad samayseen idinkii dib isugu soo jeestey oo sidii ugaar zoo lagu xareeyey oo kala nooc an midba mid cunay.
Aabahaa iyo awoogaa sidii ay cawaanta u ahaayeen oo aanu idiinka horeyney ayaanu idiinka horeynaynaa weligayo.
Weligiinba xagayaga cawaan baad ka xisaabantihiin
Inadeer waa ku salaamay!
Arinka deji! Dabshid maalintuu Majeerteen labo gantaal oo af ah ku tuuro ayaa qadada sifiican ugu dhadhantaa..
Hawiye ha u qaban xitaa maaha! Waa qoloda hadda lagu daray! Kkkkkkk
Sxb dhalay Xamar miyaad arag rag iyo Hawiye oo qaranimo qoraxda u taagan.
Shalay ayaa mooryaan Hawiye dalka bililiqaysteen oo maato laayeen miyaad Hawiye oo dhan kuwada xukumin.
Dhibka mooryaanta Hawiye u gaysteen Darood looma geysan.
Darood fagtii hore intii dhimatay alle u naxariisto laakiin Hawiye 30 sano dhiigooda la xalaalastay, bilo ka hor isgoyska 600 masto lagu xasuuqay.
Dee the big pictuare.
Xaq baad u leedahay ninka qabiilkaaga maaga in kiisa maagto.
Dabshid iyo mr Bahal waa lama yaqaan qabiil ha u maagin.
Midna cuqdad majeerteen midna cuqdad Darood.
Internet waa terapi for angry people..
Waa in wax problemkooda dusha ka saaraan helaan.
Hoppas du mår bra i Norge.
Jag var i Oslo före veckan.
Sxb shalay Xamar miyaad arag rag iyo dumar Hawiye oo qaranimo qoraxda u taagan.
Agoontii Amxaarka iyo Tegreega miyaa laga sugayaa wax aan ahayn Jaajuusnimo – saa arsaaqad kale may cunin noloshooda.
Jabarti xoolaha ka qalayay Yementa iyo Cumaan ee Somaliya u soo qaxay,deedna ka noqday Ugaadhsato middi dheer sita oo xoolaha uusmirta.Dad noocaas ah ayaa la leeyahay may ka hadlaan qaran Somaliyeed.
Somalidu ismaba taqaan dad ahaane beenbay isku maaweelisay.Beentii ay dawlad ku sheegii Somaliya soo maray ay suuqa galiyeen ayay dadkii aamineen.May ahayn in Jabarti iyo wax noocaasi ah tal atlo ku yeeshaan Somaliya.Saa dhaqan iyo hide midna uma laha nolosha degan,xalaasha la cuno,lays qadariyo,dadku Damiirka leeeyihiine waa dad sarajooga wax ku cuna.
Waligaa maad aragtay magaalo camiran oo uu Daarood leeyahay oo ka horay meelahan loogu fataalo Tegreega ee la yidhaa Bosaso ama Garoowe?
Ma jirto – xataa guryo ay lahaayeen meel ay ka dhisanyihiin lama arag.
Ninka ka sugaya dawladnimo iyo wadaniyad waa nin aan waxba ogayn oo lagu wareershay beenta la yidhaa Somali wayn iyo talo dhexda ka daloosha.
Meel yar oo calan laga taago,oo lagu dawarsado – shisheeyahana loogu fataalo ayay ka jecelyihiin qaran Somaloiyeed oo shaqeeya.Nin Ajaanib ah oo amar siiya ayay ka jecelyihiin nin Somaliyeed oo wadanka hogaamiya.
Hadii la rabo in ay Somaliya hagaagto,dadkan hala siiyo wax cunaan sida ay u dhanyihiin,hadii kale way qadhaab tagayaan oo dadkii ay tababareena way sii kaxaysan.
Xanuunku si dhib yar ayuu u faafaa,laakiin caafimaad oo soo dhexaa.Wuu tukubaa muddo dheer.
Talo waxaan u soo jeediyanaa dadka la yidhaa Samaalaha – Aka Irir Samaale.
Waxaan odhan lahaa – waar yaan lagu dayanin dadkan la yidhaa Jabartiga.Hana dhegaysaninna waxa ay sheegaan waa beene.Xataa wadaadkooda waxba haka dhegysanina.
Anuu ma jecli inaan wax editing ku sameeyeey,wixii qaldan iska saxa.
DHUFAYS DALAQ waanadi LOP baan qaatay oo KASHIITAAN la deris ahay. WBT
Ma jiro shacab somaliyeed oo aragti leh. 30kii sano ee ugu danbeeyay shacabku wey dawaqeen. Makala garanayaan waxaa u wanaagsan waxa kale.
Berri waxaad arkeysaa shacabkaas oo banaanka layskugu keenay. Laga soo dhaadhiciyay kobeeya sawirka madaxweynaha.
Salaan sare ina adeer.Dabshid laangaab ciilan inuu yahay qof kasta barxadan soo gala ayaa u jeeda inuu hal meel ka shaalaraysan yahay cayda iyo habaarka majeerteen buu ku nafisaa lkn waa u caqli xumo inuu maalin walba sidaa oohin iyo cabaad isugu daro ma majeeteen baa cabaad iyo habaar wax looga qaadaa dowladii kacaanka ayaa 21 sano oo dacaayad ,cay dil iyo xarag wax uga qaadi weydee.Gobi waa liicdaa mase jabto.Gunta waa mida jabtay oo gafuur culusta ugaandhiiska ah ku mushaaro qaadato oo iyaga la kala waardiyeeyo
Walaahi qosol isku kaadin gaaray.
Adeer Kashiitada in la hoyato dhufayska ayaa dhaanta intii dhiiqo kula ledami dadka aqligoodu saan yahay.
Laakiin Somalida fiican ayaa guulaysan.
Waa hubaa, in cimrigayga i gaarsiin Somalia oo muslim iyo gaal rabaan in dalxiis ku arkaan.
Haduu jiro laandheere somaliyeed dabshid ayaa ah. Ee aqoon ayaadan u lahayn. War ninku wuxuu idinka dhigay dad caan ah siduu maalin kasto magaciina u haayay. Anigu waaba ka careysanahay waayoo ma hubo in aad geysaan waxaas oo sheeg sheeg ah
Axmed samatar ayaan afkiisa ka hayaa hadaad caan noqotaan sidii ilma samatar ayaa somalidoo idiin sheeg sheegi. Marka waa in aad imaan dabshid uga mahad celisaan.
Horta yaa yiri majeerteenku waa laandheere weyba caroonayaan marka lasoo hadal qaado.
War lafweyntu ama laandheeruhu waa midka la caayo wixii doono lagu sameeyo lagu dul nolaado. Hadana aan dheg shaq u siinin oon kala jecleyn. Miyaadan muduloodka arag sidi duudkooda loogu wada nool yahay. Hadana aanba ogeyn.
Dabshid ninyohoow nagadaa xayeysiinta dhabayoco. Dad aan hadeey jogaan iyo hadeey maqan yihiin ay isku mid tahay ayaad magac noogu yeeshay. Kkkkkk
Caawa Ahmed Somali ka qoray:DHUFAYS dalaq …… KASHIITAAN la deris ahay. WBT
Murti aan kaa qoslin murti maaha.
Ahmed Somali you make my day!
Qayr idiin rajayn kulli.😦
Hadal run ah ayaa tiri: gob waa liicda nase jabto.
Majeeryeen 21 sano dil iyo xarig ku socday.
Isma lahayn magacooda waa la maqli doona.
Xitaa Xassan Daahir Aweys isku degey in sheik noqdo oo Bassaso dego markuu arkay in maato noqdeen.
Ilaahay baa Cabdulahi Xabsigii Ethiopia kasoo saaray oo daamanka jabiyey doofaar Garguduud.
Waa tuu aqligii Darood puntland isku aruuriyey oo puntland la dhisay, aaqirkii Somali u gurmaday.
Run gobi waa liicdaa mase jabto.
Kasoo bax godka Kashiitada LOP oo gurmad ah huka sito iyo cabaadjka iga soo baxa cidi u joogayn.
Kii isdhaqaajiya motsvarande ja adeejin najiska satta leh..
Kasoo bax godka Kashiitada LOP oo gurmad ah hubka sito iyo cabaadka iga soo baxa cidi u joogayn ayaa kugu soo fooleh
Kii isdhaqaajiya mawdka ka adeejin najiska satta leh..
Dabshid laandheeranimo ka dheer.
Laandheere dantiisa ayuu ku mashquulee ee meelaha kama cabaado.Intiina hawiye Axmed Soomaali marka aan ka reebo waxaa si bisaraaxaa u hadla oo bilaa cuqdad ah. Cadaado intiina kale wixiinu waa bacoila gurasho xin iyo xaasidnimo
Cadaado waa nin la yaqaan oo Saleeban ah rett Cadaado, laba xiniinyood warkiisa cad yahay.
Qabiil isku maaga ama dan Somalia ka dooda
Waa nin feker isku diidi kartan.
Weliba ku cayn, dee adna Saleeban cay.
Laakiin gun la aqoon oo cabsanaya in Somalia tuulada degaan sheegtaan si ula doodo awoidin.
Aviga Bookh iyo Wardheer kasoo jeedda lakiin Xamar ku dhashay macal hooyaday ku dalay, oo reerkeeda Dirirdhaba kasoo jeedan.
Maxad isku qarinaya adoo Somalia ah
Ma cidbaa dalka kaa xigta.
Laakin is qarinaya hadana caytamaya kaalay magac u bixi.
War dadkaan tas xoriyada ka qaaday yey ka baqayaan haffa vita midgo yihiin.
Kashiito waa maxay waa eray igu cusube?
Kashiito =caano qub ama qodax leey!!’
Mahadsanid waa caana qub dheh kkkkkkkkkkk
Eray cusob aan bartay maanta.
Kuuley cali banjar baan waa waxaan moodey islaan magaceed oo habeen anagoo meel ka cashaynayna magaala Gaalkacyo ayaa canug reer xamar ah oo fasax ujoogey magaalada ayaa isagoo ordaya noo soo galay ku lahaa waraa waraa kuuley cali banjah aa gaari jiirey guriga hurtiisa saanu waa ku yaacnay anagoo u haysana naag gaari darderey belo show waxa uu sheegayo waa xiddig kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Inadeer Kashiito waa lahajad koofur waxaa laga wadaa 3 suuley iyo Caano qub.
Haba urto laakin waa miskiin god kuwada dhuuman kartan habeenkii..
Subixiina qpfka meel aadin.
Sida dadka wax ma aragto mugdiga.
Nin baa igu yiri subixii markii waaga beryey waa isaalaanay oo is macasalamenay oo iga soo daba baxday oo dhinaca kale aaday. .
Very entelligent animal.
Belo oo dan ayaa cunto macal xoordubur.
Swediska waxaay u yaqaanasn jordsvin.
Waxaa laga hela East Africa keliya.
Sxb Caano qub iyo saddex suulay waa kala labo..
Midna waa qodxo miiran oo lala hoyan Karin midna xitaa dhogor malaha wsa hilib socda.
Somalida midkoodna ma cunaan.
Ahmed Somali na kala saarin.
LOP Adeer Mahadsanid haddaad xuriyadaydi i soo celisay. *Adeer, caano qub & saddex suulay SIDEEY u egyihiin maba xusuusto LAAKIIN Kashiito waa midda warmaha badan oo haddaanan qaldanayn waxay qodotaa god weyn. WBT